सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रकम नेपाल बाहिर - Himalayan Kangaroo
सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रकम नेपाल बाहिर
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ बैशाख २०७४, बिहीबार ००:५६ |
काठमाडौं । तपाईंको फेसबुक तथा ट्विटर वालमा पछिल्लो समय कति त्यस्ता पोस्ट आएका हुन सक्छन् । जसमा ‘स्पोन्सर’ लेखिएको छ । ती ‘स्पोन्सर’ लेखिएका सबै पोस्ट तपाईंलाई लक्षित गरिएका हुन् ।
यसरी ‘स्पोन्सर’का नाममा गत एक महिनाको अवधिमा हजारौं संख्यामा फेसबुक तथा ट्विटरमा पोस्ट छाएका छन् । यी पोस्ट विशेषगरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लाक्षित गरेर राखिएका हुन् । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले नेपालबाट करोडौं रुपैैयाँ बाहिर पठाइसकेका छन् । दैनिक लाखौं रुपैयाँ यसरी बाहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको चुनावलाई लक्ष्य गरी अहिले राजनीतिक दलले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्ट्राग्रामा पेज बनाएका छन् । त्यसमा राखिएका पोस्टलाई लक्षित वर्ग/समुदायमा र्पुयाउन दल तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले दैनिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पाइएको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपालबाट फेसबुकमा पोस्ट–बुस्टकै लागि भनेर दलले करोडौं बाहिर पठाइसकेको कम्प्युटर प्रोग्रामर टुरूप संग्रौला बताउनुहुन्छ । उहाँको एकाउन्टमार्फत अहिले विभिन्न राजनीतिक दलको प्रचारका लागि दैनिक ५० डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
‘मजस्तो सामान्य कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्नेको खाताबाट दैनिक ५० डलर बाहिर गइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसैलाई पेसा बनाएर काम गर्नेको एकाउन्टमार्फत कति पैसा बाहिर गएको होला ? ’ अहिले फेसबुकमार्फत दैनिक औसत १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बाहिर गएको उहाँको भनाइ छ । ‘यो फेसबुकमार्फत बाहिरिएको रकम हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्विटरमा पनि यसैगरी लगानी भइरहेको छ ।’ यो क्रम २५ दिनयता निरन्तर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रचारका नाममा फेसबुकमार्फत दुई किसिमले रकम बाहिरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिलो, आफ्नो भाषण अथवा पोस्ट बुस्टका लागि’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दोस्रो पेज प्रमोसनका लागि ।’ दल तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले आफ्नो भाषणलाई ठूलो समूहमा र्पुयाउन एउटा पोस्टको दैनिक तीन सय डलरसम्म खर्च गरेको संग्रौलाको दाबी छ । उहाँकै एकाउन्टमार्फत एउटा पोस्टका लागि एउटा दलले तीन सय डलरसम्म तिरेको छ ।
जुन रूपमा पछिल्लो समय विवेकशील नेपाली, साझा पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएका छन्, त्यो पनि यसैको एउटा प्रतिफल रहेको उहाँको दाबी छ । स्रोतका अनुसार विवेकशील नेपालीले आफ्नो पोस्ट बुस्ट गर्ने काम सबैभन्दा बढी गरेको छ ।
विवेकशीलबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार रञ्जु न्यौपानेको भाषण काठमाडौंबासीलाई लक्ष्य गरी हरेक दिन बुस्ट गरिँदै आएको छ । यसका लागि उक्त पार्टीले ठूलो रकम खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । यसमा विवेकशील नेपालीका सोसल मिडिया टिम लिडर विजय शिवाकोटी सहमत हुनुहुन्छ । दलले आफ्नो पोस्टलाई ठूलो समूहमा र्पुयाउन राम्रै खर्च गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
फेसबुकमार्फत कुन पोस्ट कसलाई र कुन स्थानका मानिससम्म र्पुयाउने हो त्यो सम्भव रहेको सफ्टनेपका कार्यकारी निर्देशक सुनील रिजाल बताउनुहुन्छ । त्यसैले विभिन्न राजनीतिक दलले पार्टीका क्रियाकलाप एवं अभियानलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष र्पुयाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेका हुन् । यसमा ठूलै रकम खर्चेर उनीहरू चुनावी अभियानमा सामेल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
Previousअष्ट्रेलिया : संसद भवनमै स्तनपान !
Nextलाखौँ डलरसहित ६ चिनियाँ पक्राउ, प्रहरी निर्वाचनमा व्यस्त रहेको मौकामा तस्करी
एलजीले ल्यायो पट्याउँन मिल्ने टेलिभिजन
७ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०३:२०
अष्ट्रेलियामा ट्याक्स रिफण्ड दोब्बर पार्ने उपाय यस्तो छ
२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार ०२:३८
भुकम्पले झण्डै ९ अर्बको कृषि उपज नाश
२८ बैशाख २०७२, सोमबार ०३:३३
१८ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०३:०६